Izu na-enweghị betas maka Macs na iOS ngwaọrụ | Esi m mac
Izu na-enweghị betas maka Macs na iOS ngwaọrụ
Izu a abụtụtụla ihe gbasara ihe niile mere na Cupertino. Firmlọ ọrụ ahụ amalitela mmemme mmemme nnọchi dị iche iche na iPhone, ewepụla ọnọdụ Sal Soghoian, onye ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20 ma na-elekọta Applescript na Automator n'etiti ndị ọzọ. Eziokwu bụ na ọ bụrụla izu ole na ole ma hapụ akụkọ a Anyị ahụbeghị ụdị beta ụdị nke sistemụ arụmọrụ dị iche iche macOS Sierra, iOS, watchOS na tvOS.
Ọ bụ Fraịdee na anyị ahụbeghị ozi ọ bụla gbasara ụdị beta maka ndị mmepe nke sistemụ arụmọrụ ọ bụla Apple nwere ugbu a, ihe dị ịtụnanya mgbe izu ụka ọbụla anyị hụrụ mwepụta nke ụdị ọhụrụ n'agbanyeghị ma ọ gbakwunyere ọtụtụ ma ọ bụ ole na ole mgbanwe tụnyere gara aga mbipute.
Ugbu a, ha agaghị ebuputa beta ọzọ ruo mgbe Mọnde ma ọ bụ Tuesday na-abịa mgbe ha nwere ike ịmalite ụdị GM nke sistemụ arụmọrụ dị iche iche. Ihe bụ eziokwu bụ na anyị ekwenyeghị na a ga-enwe izu abụọ na-enweghị nsụgharị ọhụrụ maka ndị mmepe, ya mere Izu a anyị nwere ike ikwu na ọ bụ ihe ọhụrụ n’ụdị a. N'aka nke ọzọ, ọ bụ eziokwu na ọ nweghị ihe na-amanye ụlọ ọrụ Cupertino ibido nsụgharị beta kwa izu, nke dị anya na ya, mana ọ na-eju anyị anya na ọ naghị ebupụta ha mgbe anyị na-anata ezigbo nsụgharị nwa oge. ugbu a kwa izu.
Anyị chere na n'izu a na-abịa ma ọ bụrụ na nsụgharị ọhụrụ ga-abata ma ọ bụrụ na nsụgharị ikpeazụ abịarute, mgbe ahụ ka mma maka onye ọ bụla, mana maka ugbu a enweghi otutu nkpesa ma obu nkiti achọrọ ka edozi, opekata mpe na macOS Sierra.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Izu na-enweghị betas maka Macs na iOS ngwaọrụ